Ny Malagasy sy ny fakana tahaka - yatout
Tsy laviko fa natao hifampiankina ny zanak'olombelona. Saingy mampalahelo fa eo amin'ny sehatra maro samihafa amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona dia tsy hita loatra izay vokatry ny saina Malagasy na zavatra namboarina Malagasy ampiasaina. Misy vitsy ihany eny ananonanona eny. Fa mba trandrahana sy omen-danja ho afaka mivelatra ve izy ireny ?. Voka-pikarohana maro no matoritory any ho any amin'ireny toeram-pikarohana sy toeram-pampianarana ambony ireny noho ny tsy fisiana na noho ny tsy fahampian'ny hoenti-manana. Milevina anaty vovoky ny fanadinoana ary lanin'ny koroka ny boky mitahiry azy ireny. Noho ireo voatanisa ireo dia ny vokatry ny saina vahiny no ketrehina hampandroso an'I Madagasikara. Aza gaga àry raha mihodinkodina an-toerana sy tsy tafavoaka ny tonelina eto isika mianakavy. Mihemotra aza !
Amin'ny andavanandro, eo amin'ny seha-pihariana, raha mba misy ny nivaky loha namoaka voka-pikarohana, dia misy koa ny vaky loha haka tahaka fotsiny fa tsy mba hamorona. Ary matetika izany hala tahaka izany no ampiasaina amin'ny fomba tsy ara-dalàna mba hitadiavam-bola avy eo.
Ny sehatra rehetra dia ahitana izany izany avokoa.
Enga anie "mba hiezaka hampiasa saina sy hamorona ny tsirairay, na raha voatery tsy maintsy haka tahaka ihany dia sady maka tahaka no mitondra fanatsarana ho an'ilay asa nalaina tahaka, dia handroso Gasikaran-tsika"